Amazon weputara 'dongle' iji kwado ma gee egwu na iPhone n'otu oge | Akụkọ akụrụngwa
Ruben gallardo | | Ngwa, Amazon
Apple abụghị naanị onye kpebiri iwepu nkedo ọdịyo 3,5-millimita site na atụmatụ mkpanaka ya. Na nso nso a Google mere otu ihe ahụ na nke ọhụrụ ya Google Pixel 2. Otú ọ dị, ebe ọ bụ na e kpebiri iwepụ njikọ a na Cupertino, nsogbu bilitere: ma ugbu a olee otu m ga esi ebu ma gee egwu n'otu oge ahụ? Ma nke ahụ bụ ọdụ ụgbọ mmiri Lightning bụ ọrụ maka ịrụ ọrụ a.
Agbanyeghị, enwere ụfọdụ ụlọ ọrụ kpebiri iji dozie nsogbu a. Ikekwe otu n'ime ndị kasị ama bụ Belkin. Companylọ ọrụ na-ahụ maka teknụzụ na-ewu ewu na-enye ihe nkwụnye ọkụ nke gụnyere ọdụ ụgbọ mmiri enwu ichaji mobile na a Jack 3,5mm nwee ike ijikọ ekweisi. Ọnụ ego nke ngwa a bụ euro 34,99. Ugbu a, Amazon, n'ime ụdị ya "AmazonBasics" ka kwupụtara ụzọ nke aka ya. Ọ dị ọnụ ala ma na-enyekwa ọrụ na-adọrọ mmasị.
Amazon, ibu nke azụmahịa online, maara mgbe niile nke inwe ike ịgwọta nsogbu niile. N'ime otu a, ị nwere ike ịchọta ihe niile site na akpa azụ iji buga laptọọpụ na oke, ute, eriri njikọ, wdg. Ma ugbu a, a na-agbakwunye nkwụnye na ọdụ ụgbọ mmiri enwu na igwe okwu.
Dika nkwuputa ire ahia, Ihe a sitere na Amazon dakọtara na iPhone 7 na iPhone 7 Plus. Anyị chere na otu ihe ahụ ga - arụ ọrụ na iPhone 8 na nwanne ya nwoke nke okenye, nke Plus. Ọzọkwa, ihe kachasị mma banyere ngwa a bụ na ị nwekwara ike chịkwaa olu egwu na ị na-egwu, yana ịza ma ọ bụ kwusi oku.
Mana, kpachara anya, n'ihi na ọ bụrụ na ọnụahịa ụdị Belkin ahụ dị oke ọnụ, Ngwa ngwa Amazon a na-enye ọtụtụ ọrụ ma wedata ego na euro 29,99 na mbupu n'efu ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ nke ọrụ Prime.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Amazon na-ebupụta 'dongle' iji nwee ike ibu ma gee egwu na iPhone n'otu oge